Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Marka uu Qarax Xoogan ka dhaco magaalada Muqdisho iyo Waxa ay Bulshadu dareento !!
August 22 2017 00:48:49
Marka uu Qarax Xoogan ka dhaco magaalada Muqdisho iyo Waxa ay Bulshadu dareento !!
Si mid ah kuwa ag dhow iyo inta ka fogba, waxay durbo is weydiinayaan – Meeqaa ku dhimatay?! Kama ahan inay ku wiirsanayaan qof iyo koox gaar ah oo baladu ku dhacday. Mar waxay u nugul yihiin dhibta jirta. Marna waxay ku hal adkeysanayaan inay ku wajahaan si walba oo ay u sahato noloshooda.
“Waxaad Aadanow maagan tahay, adiga iyo maankaagu iyo meel aan Ilaahay ku marin kala mid weeyaan,” Abwaan Abdiqadir Yamyam.